Mutemo weRussia weInternet unomutsa kusahadzika pakati pehunyanzvi nevamiriri | Linux Vakapindwa muropa
Vladimir Putin, purezidhendi weRussian Federation.
Mutemo weInternet wakapasiswa neRussia inomutsa kusahadzika pakati pehunyanzvi nevamiriri kubva kukodzero dzevanhu. Mutemo uyu, wakatanga kushanda musi wa1 Mbudzi, unopa hurumende yenyika el simba rekuvharira mukana wekuwana zvemukati zvese kubva mukati nekunze Russia "mune emergency".
Hauzive here kuti ndiani anosarudza kuti inyaya yechimbichimbi here kana kuti kwete?
1 Mutemo weRussia weInternet. Pakati pekusagadzikana uye zvakashata zvinangwa
1.1 Chiyero chisingamanikidzike
1.2 Kuongororwa sechinangwa
Mutemo weRussia weInternet. Pakati pekusagadzikana uye zvakashata zvinangwa
Mutemo wakabvumidzwa zviri pamutemo neMutungamiri Putin muna Chivabvu. Mukuru wehurumende yeRussian Federation akataura kudiwa kwe tvane kugona kudzimura cyberpace yeRussia kubva kune dzimwe nyika kana pakaitika emergency yenyika kana tyisidziro yekune dzimwe nyika, senge cyber kurwisa.
Kuti uwane chinangwa ichi, mutemo unosimbisa izvo vese vanopa internet sevhisi vanopa nzira nzira kuburikidza nemaseva akakosha inotungamirirwa naRoskomnadzor, mutungamiri wezvekufambiswa kwenyika.
Aya maseva yaizoita sekushandura zvaizobvisa Russia kubva kubatanidza zvekunze uku chinja internet traffic mukati meRussia nzvimbo yega, muchimiro cheinetanet hombe yenyika, iyo hurumende iri kudaidza RuNet.
Sarudzo yehurumende yeRussia haina kushamisika chero munhu. Vakuru veRussia vanga vachishanda mukugadzwa kweRuNet dince inopfuura hafu yegumi. Semhedzisiro yebasa ravo, mitemo yakadzikwa iyoyo anosungira makambani ekunze kuti achengete data revagari veRussia pane maseva ari mukati medunhu reRussian Federation.
Nyanzvi dzeInternet kwete kunyanyisa kuvimba mukushanda kwechirongwa Putin. Zvinetso zvehunyanzvi zvekubvisa nyika yese szvakaoma kunzwisisa pasina kuomesa hupfumi hwese hweRussia. Kana ikasaitwa nemazvo, iyo haunch inogona kutonhora.
Pasina kutaura kukanganiswa kwaizogadzira kune yepasirese system yekupa mazita emadunhu.
Tinofanira kurangarira kuti tiri kutaura nezvenyika ine nharaunda ye17 km². Izvi zvakaenzana nepfumbamwe yepasi pasi. Uye izvo mukati meiyo nzvimbo dzakasiyana siyana ecosystem uye tsika zvinogarisana uye yakawanda nzvimbo isingagarwe. Mikana yekudarika kiyi haina magumo.
Masangano ekodzero dzevanhu anodaro mutemo wacho waisambove pamusoro pehutongi hweinternet, asi nezve kunyoresa zviri pamutemo nekuvharisa vanhu vazhinji pasina kukonzera kuratidzira yevechidiki veRussia, avo vakajaira rusununguko runopihwa neInternet yazvino.
Maererano navo, chinangwa chechokwadi chemutemo ndeche gadzira hwaro hwepamutemo kumanikidza ISPs kuisa yakadzika packet yekuongorora michina pamambure avo uye kumanikidza ivo kutsausa ese Internet traffic kuburikidza neakakosha kuungana nzvimbo dzeRoskomnadzor.
Aya maSeva eRoskomnadzor ndimo mavakuru veRussia vanozogona kukamura uye kusefa traffic mukufunga kwavo uye pasina kutonga kwematare, yakafanana neGreat Firewall yeChina.
Ivo ndevekufunga kuti mutemo weInternet ndeyekuvandudza kweRussia SORM (Sisitimu yeMabasa Ekutsvagisa Mabasa) Musiyano uripo ndewekuti SORM inopa kugona kwekubata, ichibvumira mauto ekuchengetedza eRussia kutora metadata yemigwagwa kubva kuIPs. Mutemo mutsva, pachinzvimbo, unopa nzira yakatambanuka, inosanganisira anoshanda traffic kuumba kugona.
Mutevedzeri Director we Hutungamiriri hweHuman Right yeEuropean uye Central Asia, Rachel Denber akati mune chirevo:
Iye zvino hurumende inokwanisa kuongorora zvirimo kana kutoshandura Internet yeRussia kuita seyakavharwa system usingatauri kuruzhinji zvauri kuita kana nei. Izvi zvinokanganisa kodzero yevanhu muRussia kune rusununguko rwekutaura uye rusununguko rweruzivo pamhepo.
Chibvumirano chepasi rose ndechekuti Russia hapana chainoita kunze kwekuteedzera hutongi hweBeijing, iyo yakadzikawo mutemo wakafanana muna 2016. Mutemo uyu unopa hurumende mukana wekutora matanho aanoona akakodzera muinternet yenyika.
Nyika mbiri idzi dzakabatana, China ichipa rubatsiro kuRussia mukushandisa tekinoroji yakafanana neiyo "Great Wall"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mutemo weRussia weInternet unounza kusahadzika nemakakatanwa pakati pehunyanzvi nemasangano ekodzero dzevanhu
Microsoft yakasaina chibvumirano chekujoinha kuvandudzwa kweOpenJDK